သံမီးကြွေကြွေထည်စက်ရုံ - တရုတ်သွပ်ကြွေကြွေကြွေထည်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: JT101, JT102 ပစ္စည်း - ကြွေပြားအရွယ်အစား: DIA - ၂၅ * ၅/၂၆ * ၅.၅ ထုပ်ပိုးခြင်း - ပုံးအတွင်းထည့်သွင်းခြင်း - သံဘူးနှင့်အတွင်းပိုင်းကြွေပြားများဖြစ်သည်။ သံသတ္တုသည်သံဓာတ်ကိုကောင်းစွာစုပ်ယူပြီးချွန်ထက်သောစိုစွတ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါကြွေအပေါ်ယံပိုင်း non-stick အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသေချာ။ induction cookers များအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ grill pan ကို induction အပါအ ၀ င် cooker အမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အပူခံနိုင်ရည် - မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိဘဲမီးဖိုနှင့်ကင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒယ်အိုး၏အောက်ခြေရှိအရာများကအဆီများထွက်သွားပြီးသေချာစေရန် ...
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: HF 87A ပစ္စည်း: ကြွေထည်အရွယ်အစား: DIA: ၂၃ * ၂၃ စင်တီမီတာထုပ်ပိုးခြင်း - ပုံးနံရံ - အတွင်းပိုင်းကြွေနှင့်အတူသွန်းထားသောသံ။ သံသတ္တုသည်သံဓာတ်ကိုကောင်းစွာစုပ်ယူပြီးချွန်ထက်သောစိုစွတ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါကြွေအပေါ်ယံပိုင်း non-stick အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသေချာ။ induction cookers များအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ grill pan ကို induction အပါအ ၀ င် cooker အမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အပူခံနိုင်ရည် - မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိဘဲမီးဖိုနှင့်ကင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒယ်အိုး၏အောက်ခြေရှိနုံးများကအဆီများထွက်သွားပြီးအသားများကိုဟန့်တားပေးသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: JT ပစ္စည်း: ကြွေပြားအရွယ်အစား: DIA: ၃၃.၃ * ၂၁.၈ * ၃.၂ ထုပ်ပိုးခြင်း - ပုံးနံရံ - အတွင်းပိုင်းကြွေနှင့်အတူသွန်းထားသောသံ။ သံသတ္တုသည်သံဓာတ်ကိုကောင်းစွာစုပ်ယူပြီးချွန်ထက်သောစိုစွတ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါကြွေအပေါ်ယံပိုင်း non-stick အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသေချာ။ induction cookers များအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ grill pan ကို induction အပါအ ၀ င် cooker အမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အပူခံနိုင်ရည် - မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိဘဲမီးဖိုနှင့်ကင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒယ်အိုး၏အောက်ခြေရှိနုံးများကအဆီများထွက်သွားပြီးအသားများကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: HF70A， HF 71A ပစ္စည်း: ကြွေပြားအရွယ်အစား: DIA - ၆.၅ စင်တီမီတာ， DIA - ၈ စင်တီမီတာထုပ်ပိုးခြင်း - ပုံးအတွင်းထည့်သွင်းခြင်း - သံနံရံအတွင်း၌ကြွေထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံ။ သံသတ္တုသည်သံဓာတ်ကိုကောင်းစွာစုပ်ယူပြီးချွန်ထက်သောစိုစွတ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါကြွေအပေါ်ယံပိုင်း non-stick အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသေချာ။ induction cookers များအတွက်သင့်တော်ပါသည်။ grill pan ကို induction အပါအ ၀ င် cooker အမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ အပူခံနိုင်ရည် - မည်သည့်ပြproblemsနာမျှမရှိဘဲမီးဖိုနှင့်ကင်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဒယ်အိုး၏အောက်ခြေရှိအရာများကအဆီထွက်ရှိမှုသေချာစေရန် ...
Iron Fry Pan ကိုသွန်းသည်
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းသံသံကြွေကြော်ဒယ်အိုးပစ္စည်းအမှတ် HF2727 အရွယ် Dia.27cm နံရံကပ်ကြွေပြားခင်း MOQ 500Pcs 1. မိုးသည်းထန်စွာ - တာရှည်ကြွေပြားကို 2.Superior အပူဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထား 3. သံမဏိအပူဖြေးဖြေးနှင့်အညီအမျှအပူ 4. နှေးကွေးချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော: 10.5 မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ ကျက်စားခြင်း၊ ကင်ခြင်းနှင့်အခြားအရာများအတွက်ကြွေသံထည် Frying Pan Skillet၊ လက်ဆေးခြင်းနှင့်ပန်းကန်ဆေးခြင်းအန္တရာယ်ကင်းသောအစားအစာများသည်အလွယ်တကူသန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော PFOA နှင့် PTFE ကင်းကြွေကြွေထည်ခင်းနှင့်ဓာတ်ပြုနိုင်သည်။